चीनबाट औषध खरिद गर्दा एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार देखाउन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. श्रेष्ठको चुनौती – Karnalikhabar
चीनबाट औषध खरिद गर्दा एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार देखाउन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. श्रेष्ठको चुनौती
कोठमाडौँ, १७ चैत्र। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.महेन्द्र श्रेष्ठले चीनबाट खरिद गरिएको अत्यावश्यक औषधी खरिदको नेतृत्व र जिम्मा आफूले लिएको भन्दै एक रुपैयाँमात्र भ्रष्टाचार भएको देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनले औषधी खरिदमा २० प्रतिशत महंगो परेको स्वीकार्दै खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार ठहरिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताए ।
ऋषि धमलासँग नेपाली बहस कार्यक्रममा नेपाली रेडियो नेटवर्कसंग कुरागर्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले चीनबाट खरिद गरिएको सवै औषधी खरिदको नेतृत्व आफुले गरेको र यसमा एक रुपैँया भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका हुन् ।
विश्वभर कोरोना रोकथामका लागि प्रयोग गरिने औषधी र आवश्यक सामाग्रीहरुको अभाव रहेको र मुल्य बढीरहेको भन्दै अहिले चीनबाट आएको औषधी आंसिक मात्रै आएको बताए । आएको औषधीले पहिलो लटका लागि पुग्ने र आज सवै प्रदेशलाई पठाउने जानकारी दिए ।
सरकारले सवैसंग आग्रह गर्दा कोही नबोलेको र औषधी आएपछि भ्रष्टाचार गर्यो, मागेको भए हामी दिन्थ्यौ भन्नेहरु पनि देखिएको भन्दै चीन वा अरु मुलुकबाट यो भन्दा सस्तो दरमा औषधी दिन्छु भनेर टेवल टक गर्छ भने आजै आफुले चीनसंगको टेण्डर रद्ध गर्ने बताए । अहिले पनि यहि मुल्यमा चीनबाट औषधी ल्याउने केही भए सरकारले चाहिए जती औषधी एकै पटक किन्ने दावी गरे ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले अहिले खुल्ला रुपमा सामान किन्न नपाइने र संसार भरी सामान नभएकाले ठूला देशहरुले समेत सामान नपाएको बताए । विना पीपीई डाक्टरहरुलाई संक्रमितसंग कसरी पठाउने भन्दै अहिले पनि थोरै मात्र औषधी आएको छ, भोली समान नभइकन हामी कुनै पनि विरामी हेर्दैनौ भनेर डाक्टरहरु बाहिर निस्किए भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गरे।
उनले भने,‘ देश संक्रमणले ग्रस्त छ । उपचार नपाएर सारा जनता त्रसित भएका छन् । संक्रमित बढेका बढेकै छन । औषधी नभएर परिक्षण गर्न सकिएको छैन । सामाग्री नभएर चिकत्सकहरु उपचारमा जादैनौँ भनिरहेका छन् । देशभरी हाहाकार छ । यस्तो समयमा २० प्रतिशत मुल्य बढी भयो भनेर सरकार चुप लागेका बस्ने । जनतालाई उपचार नदिएर मार्ने । यस्तो बेलामा मैंले औषधी ल्याउदा भ्रष्टाचारी भन्नेहरु राज्यद्रोही हुन ।’
श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको औषधी किन्न गरिएको स्टमेट अनुसार २० प्रतिशत महंगोमा खरिद गरेका हौ । पीपीई २५ सय नेपालीमा चीन सरकारले दिएको हो । जुन महंगो समानहरु आएको छैनन् । महंगो पनि सामान म पठाउछु भनेर कुनै पार्टी आउछ भने सरकार टेन्डर रद्ध गरेर लिन्छ । टेवलमा आउनुहोस ।’
श्रेष्ठले अहिले बजारमा मास्क नभएको भन्दै पहिले ५ रुपैमा पर्ने मास्को अहिले उत्पादन मै ८ रुपैया मुल्य पर्न थालेको बताए । उद्योग बाणिज्य संघ नाफा खादा १० रुपैया पर्छ भन्दै उनले आफुले एक रुपैया कमिसन नखाएको र यो औषधी खरिदको हाकिम पनि आफै भएकाले कस्ले कहाँ लगेर उभ्याउने हो उभ्याए हुने बताए ।
अघिल्लो - लकडाउनको अवधिमा एकजना नाबालिका बलात्कृत…..
सीमामा करिब पाँच सय नेपाली अलपत्र, गौशालामा भोकभोकै रात काट्दै.. - पछिल्लो